10 Sep 2020 | News Release
အာရှနှင့် ပဖိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအခြေပြ အစီရင်ခံစာနှင့် နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များ အွန်လိုင်းသိုမှီးရာနေရာ အေဒီဘီ ထုတ်ပြန်မိတ်ဆက်
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (အေဒီဘီ) သည် နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်နေကျဖြစ်သည့် “အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသအတွက် အဓိကအညွှန်းကိန်းများ - ၂၀၂၀” ဟု အမည် ပေးထားသော စာရင်းအင်းအခြေပြ အစီရင်ခံစာနှင့် နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့်...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်နိုင်တင်းတုန့်ပြန်မှုအား ပံ့ပိုးရန် အေဒီဘီက ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၂၅၀ အတည်ပြု
ကိုဗစ်နိုင်တင်း (COVID-19) ကပ်ရောဂါကြောင့် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး၊ စားဝတ်နေရေးနှင့် စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများမှ လျော့ပါး သက်သာစေရန်နှင့် တချိန်တည်းမှာပင် တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးပြန်လည်နလံထူမှုက ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သ...
အာရှ၏ဖွံ့ဖြိုးဆဲဒေသများတွင် COVID-19 ဒဏ်ကြောင့် ယခုနှစ် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ကျဆင်းနိုင်
အာရှဖွံ့ဖြိုးဆဲဒေသများတွင် ယခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကြောင့် ဒေသ၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ကျဆင်းနိုင်ပြီး ယင်းဒဏ်အား ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ခံစားရနိုင်ခြေရှိသည်ဟု အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ၏ နှစ်စဉ်...
လက်ရှိတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသေးသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ရောဂါပြန့်နှံ့မှုကြောင့် အာရှတိုက်အတွင်းရှိဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ပြည်တွင်း ဝယ် လိုအား သိသာစွာကျဆင်းခြင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အလည်အပတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်ဖြင...
ဥရောပသမဂ္ဂက ထောက်ပံ့သည့် ADB Technical Assistance Grant က မြန်မာလူငယ်ထု၏ အတတ်ပညာပိုင်း ကျွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်မည်
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) တို့သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆ သန်းရှိသည့် နည်းပညာအထောက်အပံ့ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်နှင့် နည်းပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေး (TVET) လုပ်ငန်းများအား အရည်အသွေး...
ADB က ရပ်ရွာလူထုများ ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်နိုင်စွမ်းရှိလာစေရေးအတွက် ရွာပေါင်း ၃၀၀၀ ဝန်းကျင်တွင် ကူညီထောက်ပံ့မည်
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ ကျေးရွာစုစုပေါင်း ၂,၉၄၂ ရွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ရပ်ရွာလူထုဦးဆောင...
Strategy 2030: AchievingaProsperous, Inclusive, Resilient, and Sustainable Asia and the Pacific (Myanmar Language)
31 May 2018 | Project Document
ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after2April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders. This document dated January 2015 is provided for the ADB project 48175-002 in Myanmar.